5 बिक्री पेशेवरहरूको लागि सामाजिक नेटवर्कि Ste चरणहरू Martech Zone
Profession बिक्री पेशेवरहरूको लागि सामाजिक नेटवर्कि Ste चरणहरू
आज एउटा ग्राहकसँग भेट भयो जसले ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इत्यादिको आधारभूत कुरा बुझ्दछु र म तिनीहरूलाई केही प्रतिक्रिया प्रदान गर्न चाहान्छु। प्रारम्भ सामाजिक मिडियाको प्रभावकारी उपयोग गर्न। ग्राहक एक बिक्री पेशेवर थियो र मध्यम को फाइदा लिन सुरु गर्न चाहान्थ्यो तर सामाजिक मीडिया रणनीति माथि बढावा दिंदा कसरी उसले आफ्नो कामको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्छ भनेर निश्चित थिएन।
त्यो सामान्य समस्या हो। सामाजिक नेटवर्किंग अनलाइन नेटवर्किंग अफलाइन विपरीत होईन। तपाईं व्यक्तिहरूलाई भेट्नुहुन्छ, कनेक्टर्सहरू चिन्नुहुन्छ, र प्रभावकारहरू र सम्भावनाहरूसँग सम्बन्ध फेला पार्नुहुन्छ र निर्माण गर्नुहुन्छ। तपाईं केवल पहिलो रेनमेकर घटनामा मात्र कदम चाल्न सक्नुहुन्न र (रेनमेकरहरू एक हो क्षेत्रीय नेटवर्किंग समूह त्यो विस्फोटक वृद्धि छ)। यो समय लिन्छ, केहि खन्नको लागि आवाश्यक हुन्छ, र अन्तत: गति तपाईको नेटवर्कबाट नाफा सुरू गर्न। यो अफलाइन छ रूपमा यो सत्य अनलाइन छ।
Net चरणहरू सफलतापूर्वक ड्राइभ बिक्रीमा सामाजिक नेटवर्किंग को उपयोग गर्न
अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्: तपाईंको बनाउनुहोस् LinkedIn प्रोफाइल, खोल्नुहोस् twitter खाता, र यदि तपाईं प्रक्रियाको गति (र अधिक समय लगानी) गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको ईन्डस्ट्रीमा ब्लग लेख्न सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग ब्लग छैन भने अन्य ब्लगहरू फेला पार्नुहोस् जुन तपाईं योगदान गर्न सक्नुहुनेछ।
कनेक्टरहरू चिन्नुहोस्: तपाईको समुहमा कनेक्टर्सहरू फेला पार्न एउटा द्रुत तरीका भनेको अनलाइन नेटवर्कमा लिंक गर्नु जस्तै लि Lin्कइन। ट्विटरमा, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ ह्यासट्याग अनुसन्धान गर्दै र ती उद्योग ट्वीटको पछाडि व्यक्तिहरू फेला पार्दै। उन्नत उपकरणहरू जस्तै रेडियन यहाँ पनि मद्दत गर्न सक्छ!
ब्लगहरूको लागि, टेक्नोराटीमा भर्खरको परिवर्तनले तपाईंलाई तपाईंको लक्ष्यहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। सीआरएम जस्तो टर्मको लागि ब्ल्ग खोजी गर्नाले तपाईंलाई ब्लगको सूची उपलब्ध गराउँदछ, लोकप्रियताको क्रममा! तपाईंको मनपर्ने फिड रिडरमा यी फिडहरू थप्नुहोस्!
सम्बन्ध बनाउनुहोस्: एकचोटि तपाईंले जडानकर्ताहरू पहिचान गर्नुभयो, टिप्पणीहरू र ट्वीटहरू मार्फत सम्बन्धित योगदानहरू थपेर उनीहरूको सामग्रीमा मूल्य थप्न सुरू गर्नुहोस्। आत्म-पदोन्नति नगर्नुहोस् ... यी मान्छेहरू होइनन् खरीद तपाईंको उत्पादनहरू, तिनीहरू जो हुन् कुरा तपाईंको उत्पादन र सेवाहरूको बारेमा।
निम्नलाई आकर्षित गर्नुहोस्: तपाईंको उद्योगमा कुराकानी र निर्माण अधिकारमा योगदान पुर्‍याएर - जडानकर्ताहरूले तपाईंको बारेमा कुरा गर्छन् र प्रभावकर्ताहरूले तपाईंलाई पछ्याउन शुरू गर्नेछन्। यहाँ कुञ्जी दिन्छ, दिनुहोस्, दिनुहोस् ... तपाईं पर्याप्त दिन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ मानिसहरू केवल तपाईंको जानकारी चोरी गर्दछन् र यसको प्रयोग बिना तपाईंलाई भुक्तान गरिरहन्छ ... हैन! ती व्यक्तिहरूले तपाईंलाई कहिले पनि भुक्तानी गर्ने थिएनन्, जे भए पनि। ती जो हुनेछ तिर्नेहरू अझै छन् जो एक हुन्।
सगाईको लागि मार्ग दिनुहोस्: यो जहाँ ब्लग वास्तवमै काम आउँछ! अब जब तपाईका साथीहरूको ध्यान लाग्यो, तपाई संग ब्यापार गर्नका लागि उनीहरुलाई फिर्ता लिनु पर्छ। ब्लगका लागि यो तपाईको साइडबार वा सम्पर्क फारममा कल-टु-एक्शन हुन सक्छ। डाउनलोड वा वेबिनरहरूको लागि केहि रेजिष्ट्रेसन पृष्ठहरू प्रदान गर्नुहोस्। यदि केहि पनि छैन भने, तपाईंको लिked्कइन प्रोफाइल उनीहरूसँग जोड्न प्रस्ताव गर्नुहोस्। तपाईंले जेसुकै निर्णय लिनुभयो, मात्र निश्चित हुनुहोस् कि यो सजीलै पत्ता लगाउन सजिलो छ ... तपाईसँग कनेक्ट गर्न सजिलो छ, अधिक व्यक्तिहरू।
बिक्रीको उत्पादनको लागि सामाजिक नेटवर्कि difficult गाह्रो छैन तर यसले लामो समय लिन सक्दछ। जसरी तपाईले बिक्री गरिरहनु भएको कलहरूको संख्या तल राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले भ्रमण गरिरहनु भएको बैठकहरूको संख्या र तपाईले बन्द गरिरहनु भएको संख्या ... तपाईले खोजिरहनु भएको उद्योगको संख्यामा केही लक्ष्य राख्नुहोस्, नम्बर तपाईं अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ, जडान गर्दै, र योगदान गर्दै। एक पटक तपाइँ तपाइँको खेल मा, एक अतिथि पोष्ट को लागी स्वयम्सेवक वा तपाइँको ब्लग मा ती कनेक्टर वा प्रभावकर्ता अतिथि पोष्ट छ। ट्रेडिंग दर्शकहरू तपाईंको नेटवर्क विस्तार गर्ने उत्तम तरिका हो।
जब तपाईं आफ्नो नेटवर्कको काम जारी राख्नुहुन्छ र कनेक्टर्स र प्रभावकर्ताहरूसँग सम्बन्धहरू निर्माण गर्न, तपाईं तिनीहरूको सम्मान प्राप्त गर्नुहुनेछ र आफैलाई अवसरहरू खोल्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई कहिल्यै थाहा नभएको अस्तित्वमा थियो। म अहिले दैनिक सल्लाह लिदै छु, नियमित रूपमा बोल्दै, किताब लेख्दै छु र बढ्दो व्यापार छ - सबै एक प्रभावी सोशल नेटवर्कि strategy रणनीतिबाट निर्मित। यहाँ पुग्न धेरै बर्ष लाग्यो - तर यो यसको लागि लायक थियो! त्यहाँ पर्खनुहोस्!
टैग: अनलाइन नेटवर्किबिक्री पेशेवरहरुसामाजिक मिडिया बिक्रीसामाजिक मिडिया नेटवर्कसामाजिक बिक्री
अहिलेसम्मको महान मार्केटिंग उपकरण!
नोभेम्बर २०, २००। 12::2009 अपराह्न
सामाजिक मिडियाको लेट अप्नाउने भएको कारण यो जानकारीले मलाई एक पेशेवरको रूपमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएको समयको साथ अधिक सक्षम हुन अनुमति दिन सक्छ - सामाजिक मिडियामा सम्बन्धित। इन्साइट डगको लागि धन्यबाद।
तपाइँ त्यो सम्बन्धलाई हाइलाइट गर्ने राम्रो काम गर्नुहुन्छ जुन अझै पनि मुख्य बिक्री प्रदर्शन कौशल हो। यद्यपि, केहि विधिहरू परिवर्तन भएका छन् वा बढाइएका छन्।
मलाई लाग्छ कि व्यक्तिहरूले केहि वास्तविक अवसर गुमाइरहेका छन् जब तिनीहरूले अवसर पहिचान गर्न र सम्झौताको सम्बन्ध बनाउने सम्बन्धको लागि विधिको रूपमा सामाजिक मिडियालाई छुट दिन्छन्।
जनवरी १, २०१5१२::2017 अपराह्न
बलियो रेफरल पार्टनर नेटवर्क बृद्धि गर्दा तपाईंको ब्यवसायमा यस बर्षमा केहि भन्दा बढि प्रभाव पार्न सक्दछ। तपाइँको रेफरल पार्टनर नेटवर्क बढाउनको लागि LinkedIn लाईभेट गर्न Referrals-In.com जस्ता निःशुल्क उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्।